PandaDoc: Abuur, dir, raadi, iyo dukumintiyada iibka eSign | Martech Zone
PandaDoc: Abuur, dir, raadi, iyo dukumintiyada iibka eSign
Noqoshada a lammaanaha Salesforce nidaamka deegaanka wuxuu ahaa khibrad layaableh, laakiin geedi socodka gorgortanka ee abuurista, dirista, iyo cusboonaysiinta bayaankeena shaqadu wuxuu ahaa hawl aad u adag. Waxaan mararka qaar u maleynayaa inaan waqti badan ku qaato qorista bayaanada shaqada marka loo eego sida dhabta ah ee aan shaqada u qabanayo lafteeda!
Maaha in la xuso, shirkad kastaa waxay leedahay qaab u gaar ah oo gudaha ah, heerka faahfaahintooda loo baahan yahay, iyo habraaca iskaashiga iyo ansixinta dukumiintiyada iibka. Aniga oo ah ganacsade oo aan ahayn wakiilka iibka, weligay xiiso uma qabo marka kooxdayda iibiyuhu dhahaan, “Ma waxaad ku heshay SOW taas oo aan u diro?”.
PandaDoc: Dukumiintiga Barnaamijka Aaladda
PandaDoc waa dukumiinti otomaatig ah oo dhan-in-mid ah oo toosiya habka loo abuuro, loo ansixiyo, iyo eSigning soo jeedinta, xigashooyinka, iyo qandaraasyada.
Iyadoo PandaDoc, ganacsi faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
Abuur dukumiintiyada iibka waqti yar - ku abuuri soo-jeedinno cajiib ah, xigashooyin is-dhexgal ah, ama qandaraasyo daqiiqado ah oo ay la socdaan tifaftiraha PandaDoc ee tafatirka-iyo-hoos u dhaca iyo hal gujin soo dhigid.
Ku ururi qorshooyin eSignatures qorshe kasta - qalabaynta saxeexyada socodka iyo bixinta khibrad macmiil oo aan cillad lahayn aqbalida soo jeedinta ama saxiixa qandaraas qalab kasta.
Fududee ansixinta iyo gorgortanka - In loo sahlo wadashaqeyn lala yeesho dib-u-eegeyaasha gudaha iyo dibaddaba iyadoo la oggolaanayo qulqulka oggolaanshaha, dib u habeynta, la socoshada nooca, iyo faallooyinka.
Bishii Maarso, PandaDoc waxay billowday a alaab saxeex elektiroonig ah oo bilaash ah si loogu suurtageliyo ganacsiyada inay si fudud ku helaan heshiisyo inta lagu gudajiray cudurkii faafa ee COVID-19 isla markaana wax looga qabanayo baahida degdegga ah ee macaamil ganacsi aan taabasho lahayn Suuqa wuxuu kujawaabay tobanaan kun oo saxiixyo ah iyo adeegsiga waxsoosaarka oo labo jeer celcelis ahaan ah.
Iyada oo PandaDoc, waxaad leedahay dhammaan astaamaha aad uga baahan tahay soo jeedinta illaa ururinta:
Soo jeedinta - Fududee hanaanka loo abuuro soo jeedimo.
Quotes - Abuur xigashooyin is dhexgal ah, oo aan qalad lahayn.
Heshiisyada - Ku abuur qandaraasyo si dhakhso ah qaabab horay loo oggolaaday.
Saxiixyada - Waqti badbaadi oo heshiisyada ku sii wado eSignatures.
Lacagaha - Ku ururi lacag bixinta saxiixyada si lacag lagugu siiyo ugu yaraan laba maalmood gudahood.
Maanta, kuma filna kaliya in la bixiyo eSignatures. Qiimaha buuxa waxaa laga helaa kahor, inta lagu gudajiray, iyo kadib saxiixa saxiixa dukumiintiyada shaqada, fikradaha, xawaaraha, iyo khibrada isticmaale-dhamaadka. Suuqa ma doonayo codsi hal muuqaal ah. PandaDoc ayaa hogaamineysa suuqa iyadoo diiradda saareysa xalka dhammaan-hal-hal kaas oo lagu daro saxiixyada elektarooniga ah oo ay weheliso cusbooneysiinta dukumiintiyada kale ee muhiimka ah, iyada oo la sii wado in had iyo jeer la hormariyo macaamiisheena.
Mikita Mikado, agaasimaha guud iyo aasaasaha shirkadda PandaDoc
Sidoo kale, PandaDoc waxay siisaa isku-darka dhammaan nidaamyada kale ee gudaha ee maaraynta xiriirka macaamiisha, maaraynta xiriirka, maamulka, biilasha, kaydinta, ama bixinta:
CRM - Iibka, Iibinta, Iip, Pipedrive, Hubspot, Zoho, Copper, Microsoft Dynamics, Zendesk Sell, Insightly, Nimble, SugarCRM, iyo Freshsales.
Payment - Xadhig, PayPal, Authorize.Net, Square, iyo QuickBooks Payments.
kaydinta - Google Drive, Box, iyo Dropbox.
PandaDoc sidoo kale waxay bixisaa Hal Saxeex ah (SSO - SAML 2.0) oo ay ku jiraan Okta, OneLogin, Microsoft Active Directory, Google Identity Platform, iyo inbadan. Waxay sidoo kale bixiyaan waxoogaa yar Isku xirayaasha Zapier in la dhexgalo meel kasta oo kale.
Isu qor 14 maalmood oo tijaabo ah 'PandaDoc Trial'
Bixinta: Waxaan ku xiran nahay PandaDoc
Tags: faallooyinka qandaraaskaabuurista qandaraaskae-calaamaddaadegsaxeexbixinta internetkapandadocabuurid soo jeedinxigasho abuuridxigashadaguduudandib u habaynta qandaraasyadasocodka oggolaanshaha iibkadukumiintiyada iibka